Warshadaha Muhiimka ah ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kobcinta Dhaqaalaha|Warshadaha Furaha
Qeybaha Muhiimka ah Waxay Feejignaan Siinayaan Warshadaha Kobaca Sare
Diirada saarista aerospace, beeraha / soosaarida cuntada, tikniyoolajiyada nadiifka ah, teknolojiyada macluumaadka iyo isgaarsiinta, wax soo saarka keymaha, sayniska nolosha / caafimaadka aduunka, badaha, iyo qeybaha militariga / difaaca, Hogaamiyaasha Waaxda Ganacsiga waxay si dhow ula shaqeeyaan gudoomiyaha, warshadaha iyo hogaamiyaasha dowlada si loo abuuro iyo kor u qaadida iskaashiga dadweynaha iyo ganacsiga gaarka ah, xoojinta shaqaalaha qarniga 21aad ee bartilmaameedka, warshadaha kobaca sare, iyo horumarinta istaraatiijiyooyinka istaroogga ee ballaaran ee taageera kobaca ganacsiga yar yar iyo ballaarinta gobolka oo dhan.
Qeybta Aerospace waxay diiradda saareysaa hubinta in Gobolka Washington uu sii wado hoggaankiisa caalamiga ah sida soo saaraha diyaaradaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (UAS) iyo inuu yahay shirkad qiimo leh oo u soo iibisa silsilad caalami ah oo shirkadaha diyaaradaha iyo diyaaradaha ah. Qeybta ayaa sidoo kale la shaqeysa hogaamiyaasha warshadaha si ay ula jaanqaadaan barnaamijyada tababarka shaqaalaha iyo baahiyaha ganacsiga iyo dejinta siyaasado horseedi kara kobaca iyo maalgashiga waaxda aerospace ee gobolka oo dhan.
Waxsoosaarka Beeraha iyo Cuntada
Qeybta Beeraha waxay diiradda saareysaa ballaarinta suuqyada 300 ee badeecooyinka dalagga ee Washington iyo sidoo kale cuntooyinka la soo saaray iyada oo loo marayo baabi'inta caqabadaha ganacsiga, hoos u dhigista iyo xeerarka la dejiyay, iyo kordhinta waxtarka gaadiidka, iyada oo la maareynayo lana ilaalinayo kheyraadka dabiiciga ah ee qaaliga ah ee gobolka iyo dhul beereedka jira.
Mid ka mid ah ahmiyadaha ugu sareeya ee gudoomiyaha waa in la abuuro jawi dhaqaale halkaasoo hal-abuurnimada iyo hal-abuurnimadu ay ku sii wadi karto inay ku baraaraan isla markaana ay ku abuuraan shaqooyin mushahar wanaagsan ka qaata gees kasta oo ka mid ah gobolkeenna. Si tan loo taageero, waaxda Tiknoolajiyadda Nadiifku waxay la shaqaysaa qaybaha kala duwan ee warshadaha iyo daneeyayaasha si loo sahamiyo loona dhammaystiro teknoolojiyad cusub iyo habab wax soo saar si loo hagaajiyo waxqabadkooda deegaan iyo ganacsi.
Waaxda Waxsoosaarka Kaymaha ee Washington waxay siisay ilaalin caqli-gal ah ee kheyraadkeena dabiiciga ah iyo sii wadida bulshada, shaqooyinka mushaharka qoyska in ka badan 165 sano. Inkasta oo ay jiraan caqabado, awooda warshaduhu u leeyihiin inay ikhtiraacaan, u casriyeeyaan una ballaadhiyaan ayaa caddayn u ah in qaybtan weyn ee waayihii Washington ay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaari doonto mustaqbalkeenna. Soosaarista saxarka iyo xaashiyaha iyo alaabada alwaaxda ah ee qiimaha lagu daro (sida albaabada, muraayadaha daaqadaha iyo jaranjarooyinka), wax soo saarka keymaha ayaa ah qeybta 3aad ee wax soosaarka ugu weyn Washington.
Macluumaadka iyo Teknolojiyada Isgaadhsiinta
Meelo yar oo dalka ka mid ah ayaa la mid noqon kara shaqaalaha hibada u leh Washington ee macluumaadka iyo teknolojiyadda isgaarsiinta (ICT), ha ahaadaan kuwa ka shaqeeya bilowga bilowga ee loogu talagalay inay noqdaan halyeeyga ganacsi ee soo socda ama shirkadaha saamaynta adduunka ku yeeshay suuqa. Istaraatiijiyadda waaxda ICT waxay fududeeysaa maalgashi waara, karti sare iyo koritaanka waaxda tikniyoolajiyadda goynta, oo ay kujiraan softiweerrada, shabakadaha, ciyaaraha, kombuyuutarrada iyo xogta weyn.
Qaybtani waxay ka kooban tahay hay'ado cilmi baaris oo heer caalami ah, dhiirrigeliyeyaal iyo karti-yaqaanno iyo hay'ado si wanaagsan u dhisan oo loo aqoonsan yahay daah-furitaankooda horumarineed. Qeybta Nolosha Sayniska / Caafimaadka Caalamiga ah waxay diirada saareysaa qorista shirkado iyo ururo cusub Washington, ka caawinta kuwa hada jira inay balaariyaan oo ay koraan, iyo kordhinta tirada cilmi baarayaasha caalamka laga yaqaan iyo maalgalinta dowlada dhexe ee hay'adaha cilmi baarista ee Washington.
Ka faa'iideysiga xididdada badda ee Washington, qaybtani waxay diiradda saareysaa kor u qaadista siyaasadaha iyo ficillada lagu ilaalinayo caafimaadka warshadaha iyada oo la abuurayo saldhig xoog leh oo loogu talagalay koritaanka mustaqbalka, oo ay ku jiraan wax ka qabashada arrimaha oggolaanshaha ee noqon kara xannibaadda waddooyinka maalgashiga ganacsiyada badda. Qeybta badaha waxaa kale oo ka go'an inay xirto nusqaamaha ka jira tababarka iyo waxbarashada ee ku saabsan ganacsiga badaha iyo kobcinta horumarka dhaqaalaha badaha ee gobolka oo dhan.
Militariga iyo Difaaca
Qaybta Milatariga iyo Difaaca ee Washington waxay taageertaa kobaca dhaqaalaha gobolka iyada oo loo marayo hawlo kala duwan oo difaaca ah iyo rakibo militari, qandaraaslayaal iyo kuwa wax iibiya iyo bulshooyinka saaxiibtinimada milatari leh. Qeybtaan waxay diirada saareysaa seddex arrimood oo muhiim ah: yareynta hoos udhaca milatariga ee guud ahaan gobolka, u doodista waaxda gobolka iyo dibedda, iyo wax ka qabashada caqabadaha iyo fursadaha kobaca iyadoo diirada la saarayo dib u habeynta iyo xiritaanka (BRAC) iyo kala guurka guuleysta xubnaha adeegga nolosha bulshada.